मैत्री अस्पताललाई पीसीआर परीक्षण अनुमति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मैत्री अस्पताललाई पीसीआर परीक्षण अनुमति
भक्तपुर — राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल–कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताललाई कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) ल्याब सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
अस्पतालले ल्याब सञ्चालन अनुमति प्रक्रियाकै क्रममा ८ सय १२ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिसकेको छ । ल्याब सञ्चालनको अनुमति पाएसँगै अब पीसीआर परीक्षणमा देखिएको अन्योल हटेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले हस्ताक्षर गरी पीसीआर मेसिन सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरेकी नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । मध्यपुर थिमि नगरले दातृ संस्थासँगको समन्वयमा पीसीआर मेसिन जडान गरी आफ्नै खर्चमा कोभिड–१९ परीक्षणको सुविधा उपलब्ध गराएको उनले जनाए । अस्पतालले तीन महिना अघिदेखि ल्याब स्वीकृतिको माग गर्दै पटक–पटक अनुगमन गरिदिन आवेदन दिँदै आएको थियो ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भने ल्याबको व्यवस्थापकीय सुधारको पाटोलाई लिएर स्वीकृति दिन आलटाल गरेको थियो । प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झासहित डा. रीतु अमात्य, डा. पीयूष राजभण्डारी, डा. मुकुन्दा शर्मा, लिली श्रेष्ठ ढुंगेललगायतको टोलीले अनुगमन गरी दिएको सुझावअनुसार मापदण्ड पुग्ने पूर्वाधारको व्यवस्था गरेपछि स्वीकृति पाएको र बुधबारबाट सेवा सञ्चालन गरिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यहाँस्थित पीसीआर मेसिनले एकै पटकमा ९६ नमुनाको परीक्षण गर्न सकिन्छ । समूहमा परीक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति सरदर सातदेखि नौ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । नगरपालिकाले उक्त खर्चको व्यवस्थापन गरेर नि:शुल्क सुविधा दिएको नगर प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि चारवटा भेन्टिलेटरसहितको ६ वटा आईसीयू शय्या र २० शय्याको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गरेको छ । अस्पतालमा २६ जना चिकित्सक र पाँच कन्सल्टेन्टसहितको स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीलाई २४ घण्टा सेवा दिने गरी जिम्मेवारीमा खटाइएको छ ।
दक्षिण कोरियाको क्योंही इन्टरनेसनल मेडिकल कोअपरेसनमार्फत सन् १९९९ मा स्थापना भएको ‘कोरिया–नेपाल मैत्री स्वास्थ्य केन्द्र’ मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि ‘नेपाल–कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल’ का रूपमा सञ्चालित छ ।
नगरपालिकाले कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीलाई सुरक्षित तवरले अस्पताल ल्याउन एम्बुलेन्सलाई विशेष रूपमा तयार गरेको छ । उक्त एम्बुलेन्स चलाउने चालकलाई आवश्यक स्वास्थ्य अभिमुखीकरण गराएर स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (पीपीई), मास्क, पन्जा, डिसइन्फेक्सन किट्स उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रकाशित : असार ९, २०७७ ०७:३०
सय रुपैयाँभन्दा बढीमा आईपीओ निष्कासन व्यवस्था हुँदै
नयाँ व्यवस्थाले बजारमा राम्रो ‘पर्फमेन्स’ देखाइरहेका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्न सकिने
असार ९, २०७७ यज्ञ बञ्जाडे
काठमाडौँ — सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा बढीमा निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । ‘बुक बिल्डिङ’ भनिने यो व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि प्रिमियम (अंकित मूल्यमा थप गरी) मा सेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीले अंकित मूल्य एक सयभन्दा बढीमा प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउनेछन् । तर साधारण रूपमा सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले भने अंकित मूल्य एक सयमै सेयर जारी गर्नुपर्नेछ । बुक बिल्डिङ विधि अनिवार्य नभई स्वेच्छिक हो ।
नयाँ व्यवस्थाले बजारमा राम्रो ‘पर्फमेन्स’ देखाइरहेका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । सुझावका लागि मस्यौदा सेबोनको वेबसाइटमा राखिएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिइनेछ । यो विधिबाट अंकित मूल्य सयभन्दा बढीमा सेयर निष्कासन गर्न भने बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये बुक बिल्डिङबाट आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनी लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि नाफामा सञ्चालन भएको, साधारणसभाले सो विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको, प्रतिसेयर नेटवर्थ प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र औसत वा औसतभन्दा माथि रेटिङ पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो प्रक्रियामा निष्कासनमा संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियाबाट सेयर बोलकबोल प्रक्रियाबाट भर्नेछन् । संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियाबाट सेयर भरेपछि त्यसका आधारमा ‘कटअफ’ मूल्य निकालिनेछ । जति ‘कटअफ’ मूल्य निस्केको हुन्छ त्यही मूल्यमा सम्बन्धित कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्छन् ।
‘कटअफ’ मूल्य निकालेपछि त्योभन्दा बढी मूल्यमा आवेदन गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताले सबै सेयर पाउँछन् । त्यसपछि ‘कटअफ’ मूल्यमा भरेकाले सेयर पाउँछन् भने त्योभन्दा कम मूल्यमा भरेका लगानीकर्ताले समानुपातिक तरिकाले सेयर पाउनेछन् ।
आईपीओ जारी गर्न बुक बिल्डिङका लागि सबैभन्दा पहिला संगठित संस्थाको विवरण तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि संगठित संस्थासँग छलफल तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । अख्तियार प्राप्त संस्थाले आईपीओ ल्याउने कम्पनीको सेयरमा कतिसम्म मूल्य कबुल्ने भनी विशेषज्ञबाट अध्ययन गराई निर्णय गर्छनु । र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले जुन माथिल्लो बिन्दुमा मूल्य कबुल्छन्, त्यही मूल्यमा आईपीओको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक निष्कासन गर्ने एउटा यस्तो वैकल्पिक विधि हो, बुक बिल्डिङ । सेयर वा अन्य धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा धितोपत्रको सही मूल्य निर्धारण गर्न बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ता (बुक रनर) ले लगानीकर्ताबाट धितोपत्रको माग सृजना गर्ने, संकलन गर्ने र अभिलेख गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो । यो विधिमा बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले विभिन्न सम्भाव्य लगानीकर्ताको मागका आधारमा सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण गरिन्छ ।
सम्भाव्य लगानीकर्ता, जस्तै वित्तीय संस्था, संस्थागत लगानीकर्ता, उच्च नेटवर्थ भएका व्यक्ति आदिबाट कुनै कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको धितोपत्रको खरिद गर्न चाहेको संख्या र तिर्न चाहेको मूल्य माग गरी त्यसको अभिलेख किताब निर्माण गर्छ । बुक बिल्डिङ पद्धतिमा बुक भन्नु सम्भाव्य लगानीकर्ताबाट प्राप्त माग तथा मूल्यको संग्रह हो । जुन बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताबीच गोप्य रहन्छ । यो विश्वका विकसित पुँजीबजारमा धेरै समयदेखि प्रयोगमा छ । छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशलगायतको पुँजीबजारमा समेत यो पद्धतिको सुरुवात भइसकेको छ ।
यस पद्धतिमा बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले सार्वजनिक निष्कासनको अवधिका दौरान विभिन्न सम्भाव्य लागनीकर्ताबाट बोलपत्र आह्वान गर्दछ । लगानीकर्ताले निष्कासनकर्ता कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्य सीमाभित्र रही आफ्नो बोलपत्र पेस गर्छन् । लगानीकर्ताले निष्कासनकर्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण, साख, कार्यसम्पादन मूल्यांकन आदिका आधारमा धितोपत्रको मूल्य तय गरी बोलपत्र पेस गर्छन् ।
कम्पनीको आधार (सूचक) राम्रो भए माग उच्च हुन्छ भने खराब भए माग कम हुन्छ । निश्चित अवधिपछि बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले बुक बन्द गर्छ । अभिलेख भएको मागका आधारमा सार्वजनिक निष्कासनको अन्तिम मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यो प्रक्रियामा आईपीओ निष्कासनको मूल्य निर्धारण हुनुका साथै निष्कासित धितोपत्रको मागको अवस्थासमेत थाहा हुन्छ ।
प्रकाशित : असार ९, २०७७ ०७:२९